‘जिन्दगी अनलक’ हेपाटाइटिस ए हुने उच्च जोखिमः तयार रहनुहोस्, समयमै खोप लगाउनुहोस्
गृहपृष्ठ » स्वास्थ्य » ‘जिन्दगी अनलक’ हेपाटाइटिस ए हुने उच्च जोखिमः तयार रहनुहोस्, समयमै खोप लगाउनुहोस्
स्वास्थ्य व्यूरो । हेपाटाइटिस ए भाइरसको कारणले हुने कलेजोको संक्रामक संक्रमण हो। यसले हल्कादेखि गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ जुन केही हप्तादेखि महिनासम्म रहन सक्छ।
महामारीका कारण बालबालिकाहरू लामो समयसम्म घरमै थुनिएका थिए र यस अवधिमा उनीहरूले ई–लर्निङ, भिडियो गेम, मोबाइल, टिभी आदिमा मात्रै मनोरञ्जन खोज्ने गरेका थिए ।
उसले बिरलै बाहिर जाने र साथीहरूसँग खेल्ने मौका पाएको छ, तर जीवन बिस्तारै ट्रयाकमा फर्किरहेको छ। विशेषगरी बालबालिकाका लागि यो समय निकै खुसीको समय हो किनभने उनीहरूले फेरि घरबाट बाहिर निस्केर खेल्ने अवसर पाइरहेका छन् । hepatitisasymptoms causes diagnosis prevention treatment
यसका साथसाथै उनीहरुले आफ्नो विकास र हितका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने यस्ता गतिविधिमा सहभागी हुने अवसर पाइरहेका छन् । यद्यपि हाम्रो जीवनको गाडी ट्रयाकमा फर्किँदैछ, आमाबाबुले कोभिड १९ मा मात्र होइन अन्य जीवनमा आउने रोगहरूमा पनि निगरानी राख्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
बालबालिकाका लागि बाहिर जानु भनेको आफ्नो मनपर्ने बाहिरको खाना खानु हो तर बाहिरको खाना खाँदा रोगको जोखिम बढ्छ । यस्तै एउटा रोग जण्डिस हो । सामान्यतया के द्वारा फैलिन्छ (हेपाटाइटिस ए भाइरस) जसलाई तत्काल ध्यान दिनु आवश्यक छ।
हेपाटाइटिस ए के हो ?
हेपाटाइटिस ए भाइरसको कारणले हुने संक्रामक कलेजोको संक्रमण हो। यसले हल्कादेखि गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ जुन केही हप्तादेखि महिनासम्म रहन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १० करोडभन्दा बढी मानिस हेपाटाइटिस ए बाट संक्रमित हुन्छन्।
यद्यपि यी कलेजो संक्रमणहरू सामान्यतया बच्चाहरूमा हल्का र सामान्य मानिन्छ, तिनीहरू केही अवस्थामा गम्भीर हुन सक्छन्। संक्रमणले सामान्यतया ठूला बालबालिका र वयस्कहरूमा बढी गम्भीर लक्षणहरू निम्त्याउँछ। जन्डिस ती मध्ये एक हो जुन ७० प्रतिशत भन्दा बढी घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् ।
हेपाटाइटिस ए संक्रमणले दीर्घकालीन संक्रमण गर्दैन। यद्यपि, गम्भीर हुन सक्छ । यदि जाँच नगरिएको खण्डमा, यसले केही अवस्थाहरूमा गम्भीर जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ, जस्तै कलेजो विफलता र केही अवस्थामा मृत्यु पनि।
प्रकोप विश्वव्यापी रूपमा देखा पर्दछ, विशेष गरी गरीब सरसफाइ नभएका क्षेत्रहरूमा। बढी सरसफाइ गरिएको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्दा भाइरसको सम्पर्कमा नआएका बालबालिकाले बाल्यकालमा हेपाटाइटिस ए संक्रमणबाट बच्न सक्छन्। यद्यपि, तिनीहरू किशोरावस्था र वयस्कतामा यो गम्भीर संक्रमणको लागि बढी जोखिममा हुन सक्छन्।
यो कसरी फैलिन्छ ?
दूषित पानी र दूषित खानेकुरा खाँदा यो रोग सर्छ । यो पनि मुख्यतया मल मौखिक मार्गबाट ​​व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन्छ। यसका अन्य कारणहरू पनि छन्, जस्तै कुनै पनि दूषित पानी वा खानेकुरा तयार गरी सफा तरिकाले नपाएपछि पनि यो रोग सर्छ।
यी संकेत र लक्षणहरूमा ध्यान दिनुहोस्
संक्रमित हुने सबैले लक्षण देखाउँदैनन्। लक्षणहरू (यदि तिनीहरू विकसित हुन्छन् ) सामान्यतया संक्रमण पछि २ देखि ६ हप्ता भित्र देखा पर्दछ। जुन यस्तो देखिन्छ
जन्डिस (पहेलो हुँदै जानु )
याद गर्नुहोस्, संक्रमित सबैले सबै लक्षणहरू देखाउँदैनन्। केहि अवस्थामा, लक्षणहरू ६ महिना सम्म रहन सक्छ।
यसलाई रोक्न सकिन्छ ः
हो, हेपाटाइटिस ए संक्रमण रोक्न सकिन्छ। हेपाटाइटिस ए बाट बच्ने सबैभन्दा सजिलो उपायहरू यी हुन् ।
१, सफा पानी पिउनुहोस् र खाना राम्ररी पकाउनुहोस्। थप रूपमा, काँचो मासु र खोलाका माछा बेवास्ता गर्नुहोस्। फलफूल र तरकारीहरू सफा पानीमा धुन सिफारिस गरिन्छ।
२, शौचालय प्रयोग गरिसकेपछि आफ्नो बच्चाको भित्री कपडा परिवर्तन गरेपछि र खाना पकाउनु र खानु अघि साबुन र पानीले हात धुनुहोस्।
३, आफ्नो घर भित्र र वरपर सफा वातावरण सुनिश्चित गर्नुहोस् ।
४, खोप। यसले तपाईंको बच्चालाई हेपाटाइटिस ए बाट जोगाउन मद्दत गर्छ।
हेपाटाइटिस ए को उपचार ?
हेपाटाइटिस ए को लागि कुनै विशेष उपचार छैन र त्यसैले रोकथाम उपायहरू अपनाएर यो रोग रोक्न बुद्धिमानी छ। हेपाटाइटिस ए खोप नै रोक्नको लागि एक भरपर्दो तरिका हो।
हेपाटाइटिस ए को खोप कहिले दिन सकिन्छ ?
हेपाटाइटिस ए खोप एक वर्ष वा सोभन्दा माथिका बालबालिकालाई दिन सकिन्छ। त्यसकारण, विश्व र राष्ट्रिय स्वास्थ्य अधिकारीहरू जस्तै डब्ल्यूएचओ, नेपाल स्वास्थ्य परिषद् र इन्डियन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सले खाँचोमा परेका सबै बालबालिकालाई हेपाटाइटिस ए खोप लगाउन सिफारिस गर्छन्।
थप जानकारीको लागि आफ्नो बाल रोग विशेषज्ञलाई सल्लाह दिनुहोस् । हेपाटाइटिस ए को बारेमा धेरै आवश्यक चेतनाको साथ, आमाबाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई जोगाउन खोप मार्फत रोकथामको लागि आफ्ना डाक्टरहरूको मद्दत लिनुपर्छ।
जीवन अनलक छ को रूपमा, सामुहिक चेतना, सही मार्गदर्शन, सावधानीहरू पालना र खोपहरू जस्ता स्वास्थ्य उपायहरू पालना गरेर बालबालिकाहरूलाई स्वस्थ र रोगमुक्त राख्न सकिन्छ। जानकारी सबैमा साझा गरौँ ।
जाडोयाममा मोजा लगाउँदा होसियार, नत्र ज्यानपनि जानसक्छ !
ओमिक्रोन भेरियन्ट भारतीय सीमा नाकाबाटै बढी जोखिम : डा. शेरबहादुर पुन
कोभिडले छोएपछि हुने दिर्घकालिन समस्याका बारे खुलेको तथ्यले सबैलाई झस्कायो
अमेरिका, भारत, श्रीलङ्का सहित ३५ देशमा भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट, नेपालमा के छ ?
नेपालमा एचआइभी/एड्स भयावह रहेको तथ्य सार्वजनिक, जान्नुहास् कहाँ कति संख्यामा छन् ?
कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन बारे बोल्यो विश्व स्वास्थ्य संगठन
यी २० मुलुकमा फैलियो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन, नेपाल कति जोखिममा ?
तिव्र फैलिन थाल्यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट : प्रयोगमा आएका खोप कति प्रभावकारी ?
दुनियाँभर अर्को त्रास, डब्लूएचओले समेत उच्च सतर्क रहन जारी गर्यो आकस्मिक चेतवानी
अफ्रिकी देशका नागरिकलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म नेपाल प्रवेशमा निषेध
कोरोना संकटबीच काठमाडौंमा लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने रोग फैलने संकेत
जान्नुहोस् मदिराको ह्याङओभर कसरी हटाउने, कसरी कलेजो सुरक्षित पार्ने ?